अनिल भेटवाल बिहिबार, चैत ३, २०७८
आगामी ३० वैसाख २०७९ का दिन कुनै बिघ्न बाधा भएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । चुनावी रौनक अलिअलि गाउँ पस्न सुरु हुँदैछ । अघिल्लो चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका दलहरू नै अहिले पनि जनताका घर आँगनमा हामी नै तपाईंहरूको भाग्य विधाता हौं, हामीलाई मतदान गर्नुहोस भन्दै पुग्न थालेका छन । बहुदलीय प्रणालीमा दलका प्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित हुन जनताका अघि जानु स्वाभाविक हो । आम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने गरी काम गर्ने थलो स्थानीय तह नै हो ।
अहिलेको नेपालको संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गरेर देखाउने असिमित अधिकार पनि दिएको छ । आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्ता प्रतिनिधि छान्ने ? कसले आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल आम मतदाताहरू माझ तेर्सीएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक रूपमा दलहरू नै उत्रन्छन । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यस अघिको निर्वाचनमा कुन कुन दलहरूले के कस्ता वाचा चुनावी अभियानमा जनता सामु गरेका थिए ? गरिएका वाचाहरू के कति पुरा भए ? कति पुरा भएनन ? के कारणले पुरा भएनन ? यी यावत प्रश्नहरू मत माग्न आउने दलका प्रतिनिधिहरूलाई गर्ने कि नगर्ने ?
स्थानीय तह भनेको संघिय संसद जस्तो नीति निर्माण गर्ने थलो नभई विशुद्ध जनताका दिनदैनिकीको समस्या समाधान र विकास निर्माण गर्ने निकाय भएकोले यस्तो निकायमा स्वच्छ छवि भएको, इमान्दार र योग्य व्यक्तित्वको छनौट हुनु अनिवार्य छ । दलले उठाएका प्रतिनिधिहरू आफ्नो दल प्रति मात्रै उत्तरदायी हुने हुँदा जनता प्रति उत्तरदायी हुने स्वतन्त्र र असल व्यक्ति मात्र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न उपयुक्त हुन्छन । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । तर दलीय व्यवस्था भएका धेरै मुलुकहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । टाढाको कुरा छोडौं, लामो समय देखि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अँगिकार गरेको भारतमा पनि स्थानीय तह पञ्चायतको चुनावमा निर्दलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नै प्रतिस्पर्धा गर्छन ।
हामी करिब दुई वर्ष मात्रै चल्ने मोबाइल खरिद गर्दा पनि त्यसको क्यामरा कस्तो छ, कति जिबिको मेमोरी छ, कुन रंगको राम्रो हुन्छ ? भनेर धेरै सोचविचार गरेर मात्र खरिद गर्छौं भने पाँच वर्षका लागि आफ्नो गाउँ शहरको नेतृत्व चयन गर्दा थोरै विचार नगर्ने ?
नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको औचित्य अझ बढी छ । बहुदल आएपछिको यो ३२ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नैतिक पतन भएका, भ्रष्टाचारमा लिप्त, देशहित भन्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, अदालतले दोषी ठहर गरेका अपराधीहरूलाई समेत दलले कार्वाही गर्नुको साटो अझ पदोन्नति गरेर चोख्याएको इतिहास हाम्रो सामु छ । धेरै मुलुकहरूमा प्रचलनमा रहेको फिर्ता बोलाउने अधिकार (Right to recall) र मतदान नगर्ने अधिकार (Right to reject) को व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने हो भने दलहरूले पनि असल व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ र धेरै हद सम्म स्थानीय तह दलहरूको दलदलबाट मुक्त हुन सक्छ ।
प्रसँग यस अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनको–धेरै उम्मेदवारहरूले अझ त्यसमा पनि उम्मेदवार उठाएका दलहरूले कस्ता कस्ता वाचा गरेका थिए ? कतिपय पुरा गर्न सकिने र कतिपय आगामी २५ वर्षमा पनि पुरा गर्न नसकिने । तर हामीले पत्यायौं । हाम्रो शहरलाई फ्रि वाइफाइ शहर बनाउँछौं भन्दा पनि हामीले थप्पडी बजायौं, स्मार्ट सिटी बनाउँछौं भन्दा पनि हामीले ताली पिट्यौं । मेट्रो रेल र मोनो रेलको त कुरै नगरौं । अब एक पटक तीनै दल र तीनका प्रतिनिधिलाई उनीहरूले गरेको वाचा बारे सोध्ने बेला भएन र !
अन्त्यमा मेचीनगर–पाँच वर्ष अघि हामीले हाम्रो नगरको नेतृत्व चयन गरेका थियौं । विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूको मिस्रित परिणाम आएको मेचीनगमा उल्लेख्य काम के के भए ? नगरको मौजुदा आर्थिक स्रोतलाई परिचालन गरेर के कति काम गर्न सकिन्थ्यो ? पाँच वर्ष भित्रमा नगरका बाटाघाटा, पुलपुलेसा, शिक्षा र स्वस्थ्यको क्षेत्रमा भएका काम,नगरको दीर्घकालीन योजना, उद्योग व्यावसाय र कृषिको क्षेत्रमा भएका काम, न्यायिक समिति मार्फत सम्पादन भएका काम, यहाँका मौलिक जातजाति भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काम, भारत सँग प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएको तर नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानको ट्रान्जिट पोइन्ट भएको शहरले विगत पाँच वर्षमा देखिने गरी गरेका कामहरू के के हुन ? यी र यस्ता यावत प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ मेचीनगरका आम सर्वसाधारणले चाहेका छन ।
नेतृत्व कुनै अमुर्त वस्तु होईन, त्यहाँ व्यक्ति नै हुन्छन । विगत पाँच वर्षमा कतिपय नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू बारे सार्वजनिक रूपमा उठेका सवालहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि मेचीनगरवासीले खोजेका छन । मकै काण्ड, खोला उत्खनन काण्ड, दमकल काण्ड लगायत काण्डै काण्डले भरिएको नगर नेतृत्व विगतमा एउटा जनप्रतिनिधिले अर्को जनप्रतिनिधिलाई दोषारोपण गरेर चोखिने गरेको पनि देखिएको हो । जनताको ढाड सेकिने गरी कर लगाएर जनप्रतिनिधिहरूका लागि खरिद गरिएको सवारी साधनको चरम दुरुपयोग भएको पनि देखिएको छ । नगर नेतृत्वकर्ताहरू नगरपालिकाको सवारी साधन प्रयोग गरेर आआफ्नो पार्टीको अधिवेशन, सम्मेलन, भेला र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको पनि देखियो । हामीले गाँस काटेर तिरेको करले खरिद गरिएको सवारी साधन नगरपालिकाको कामको लागि हो कि पार्टी कामको लागि ? पुरानै पात्र यस पटक पनि उम्मेदवार भएर आए भने उनीहरूले यी यावत सवालको जवाफ दिनुपर्छ । होईन नयाँ पात्र बोकेर पुरानै दल आएमा दल जिम्मेवार हुनु पर्दछ र उल्लेखित सवालको जवाफ दलले दिनु पर्दछ ।
लोकतन्त्रको अत्यन्तै सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । यसको सबैले सदुपयोग गरौं । साथसाथै शिर ठाडो पारेर मत माग्न आउनेलाई प्रश्न गरौं । दल र जनप्रतिनिधिहरु हाम्रा सेवक हुन् शासक होईनन् । अस्तु ।।
धुलाबारी, झापा । २०७८/१२/३ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ३, २०७८, १७:३६:००